Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Novambra 2019 à 03:24
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Oktobra 2019 à 16:19 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Novambra 2019 à 03:24 (hanova) (esory)
Ny '''[[Fanandroana malagasy|fanandroana malagasy]]''' dia endriky ny [[fanandroana]] ataon'ny mpanandro malagasy izay andinihany sy ampiharany ny fifandraisan'ny fotoana ahaterahan'ny olona iray na ny fotoana ahatanterahan'ny zavatra iray ampifandraisina amin'ny toerana sy ny toetran'ireo zavatra eny amin'ny lanitra, indrindra ny [[Volana]], araka ny [[Tetiandro malagasy|tetiandro nentin-drazana malagasy]] sy ny fifandraisan'izany amin'ny ho toetr'ilay olona teraka na ilay zavatra miseho na tiana hotanteraka. Izany fifandraisana izany no atao hoe vintana. Ambaran'ny mpanandro malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavin'ny olona ateraka na ny zavatra tanterahina tandrify azy ny vintana nefa azo ovana izany amin'ny alalan'ny [[fanalana vintana]] raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Tsy ny vintana mifandray amin'ny [[Volana]] sy ny kintana ihany anefa no voakasiky ny fanandroana malagasy fa ny vanim-potoana rehetra hatramin'ny [[andro]] ao amin'ny [[herinandro]] sy ny fizaràn'ny andro, ka hatramin'ny [[fizaran-taona]] sy ny [[taona]] koa. Manampy izany ny [[Lafin-tany|lafintany]] (atsimo, avaratra, atsinanana sns) sy ny zavatra hafa toy ny tany, ny [[rivotra]], ny [[afo]] ary ny [[rano]] sns. Noho izany dia tsy ny fotoana ihany no sahanin'ny fanandroana malagasy fa ny erana koa.
Fanao andavanandro teto Madagasikara ny fankanesana any amin'ny mpanandro teo amin'ireo [[andriana]] amin'ny taonjato faha-18 sy faha-19. Tao Imerina teo antenantenan'ny taonjato faha-19 dia nahay nanandro ny iray ampahatelon'ny olona<ref name=":1"><small>Jobily Rakotoson, "L'art divinatoire, parole d'un sage" in ''Madagascar fenêtres'', 2002, p.93.</small></ref>.
Misy "tsara" sy "ratsy" ny vintana na ny tono'nandro. Arakaraka ny zavatra kasaina hatao no mety hahatsara na haharatsy ny tonon'andro iray, na dia mety ho tsara na ratsy amin'ny ankapobeny aza. Ohatra, ny vintana Alakaosy dia vintana malaza ho ratsy, nefa andro tsara anandratana ody ny tsinam-bolan'ny volana Alakaosy (vava Alakaosy) izay atao hoe Alakaosibe. Na dia vintana ratsy amin'ny anjkappobenyankappobeny aza ny Alahasaty dia heverina fa tobniobtonion'andro tsara ny vody Alahasaty satria ny zaza teraka amin'io dia ho tratra antitra ary tonon'andro tsara ho fisantaran-javatra sy fampakaram-bady koa ny amin'io.
Misy koa ny tonon'andro na vintana mahery na maivana. Ny [[renivintana]] rehetra dia inoana fa vintana mahery. Misy koa anefa [[zanabintana]] inoana fa mahery. Malaza ho vintana mahery indrindra ny Alahamady (renivintana) sy ny Alakaosy (nefa zanabintana). Vintana mahery ihany koa ny Adizaoza (zanabintana) sy ny Asorotany (renivintana) sy ny Adimizana (renivintana) ary ny Adijady (renivintana). Ny Alohotsy dia inoana ho vintana maivana.
Lazaina fa mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adimizana nefa mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny vintana Alahamady. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia ny vava Alahamady (na vavan'Alahamady) sy ny vonto Alahamady (na vonton'Alahamady) ary ny vody Alahamady (na vodin'Alahamady).
Ny vava Alahamady ao amin'ny volana Alahamady dia atao hoe [[Alahamadibe]]. [[Ralambo]] sy [[Andriamasinavalona]] ary [[Andrianampoinimerina]] ihany anefa no mpanjaka laazaina fa teraka tamin' ny vava-Alahamady. Io andro io no natokana hanaovana ny [[Fandroan'Andriana]]. Andro mahery ny vava Alahamady ka ny zaza teraka amin'io dia alam-bintana fandrao misavika ny andriana, ka raha ankohonan'ny Andriana dia tsy avela hiara-mitoetra aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/977341"